Abenzi baseChina KQDP / KQDQ Booster Pump nabaphakeli | IKAIQUAN
Imodeli ye-KQDP / KQDQ ngamaphampu we-booster ama-multi-stage. Ukonga amandla, ukuvikelwa kwemvelo, okuphephile nokuthembekile yizinzuzo zayo eziyinhloko. Ingadlulisa izinhlobo ezahlukahlukene zoketshezi, futhi ingasetshenziswa ekunikezelweni kwamanzi, ukucindezelwa kwezimboni, ukuthuthwa kwezimboni okuhambisa amanzi, ukusakazwa komoya, ukuchelela, njll. I-KQDP ingasetshenziswa ezimweni ezingamanzi ezingonakalisi, i-KQDQ ingasetshenziswa kuketshezi olubuthakathaka izimo.
Ukugeleza: 0.5-108m3 / h
Izinga Lokushisa Liquid: -20 ~ 70 ℃, 70-120 ℃
Izinga lokushisa elifanele ngokuvamile: ℃40 ℃
Ijubane elijikelezayo: 2980 r / iminithi
Uma unezidingo ezikhethekile: sicela ungangabazi ukuxhumana nenkampani yethu.
I-KQDP (Q) Series Booster Pump
Izinzuzo ze-KQDP / KQDQ
Ukonga amandla nokusebenza kahle okuphezulu
Ukusebenza kahle kungafinyelela ku-MEI≥0.7
Kuphephile futhi kuthembekile
Ngokugeleza okufanayo nasekhanda, ubude bufushane, ukudlidliza kuphansi, umsindo uphansi.
Sebenzisa ubuchwepheshe bokushisela obuthuthuke kakhulu, i-KQDP / KQDQ inokumelana nokuqina okuqinile, ukusebenza kahle okuphezulu. Ukusebenza kahle kungaba ngaphezulu kwe-5% -10% kunamaphampu okusakaza.
Ukusebenza kahle kwemoto
Ikheji eligcwele i-fan-seleled fan-cooled high-efficiency high-phase asynchronous motor, ukusebenza kwayo kahle kuphakeme ngo-2% -10% kunemoto ejwayelekile.
GB / T 5657-2013
Iphampu ye-booster, i-pump booster pump, i-pump pressure booster pump, i-pump booster pump, i-booster pump pump, i-pump water booster pump, i-inline booster pump, i-mains water booster pump, i-pump water booster pump, emgqeni wokuqinisa amanzi, ukufaka i-booster pump , intengo yokumpompa amanzi, njll.
Langaphambilini I-D / MD / DF Multi-Stage Centrifugal Pump
Olandelayo: I-KQL Direct-coupled in-line Single Stage Vertical Centrifugal Pump